Onye OnePlus 7 agaghị enwe asambodo IP mana OnePlus na-etu ọnụ ya na vidiyo | Gam akporosis
Onye OnePlus 7 agaghị enwe asambodo IP mana OnePlus na-etu ọnụ na vidiyo
OnePlus ọnụ na-enye anyị kediegwu arụmọrụ na uru maka ego, n'agbanyeghị na n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọnụahịa ya na-arịwanye elu nke nta nke nta ebe ọ bụ na anyị gosiri gị ụbọchị ole na ole gara aga, Ọnụahịa mmalite nke OnePlus 7 Pro nwere ike ịmalite na 749 euro na Europe.
Otú ọ dị, ụdị niile nke ụlọ ọrụ Asia OnePlus malitere na afọ ndị na-adịbeghị anya nwere ụfọdụ adịghị ike nke na-emeghị ka ha bụrụ ndị kwesịrị ekwesị maka ndị ọrụ niile. Ikuku ikuku na asambodo IP bụ ihe atụ abụọ doro anya n'ime ya. Banyere nke ikpeazụ, ụlọ ọrụ ahụ na-anya isi na ya na vidiyo ọhụrụ ya.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, arụmụka maka ịgbakwunyeghị asambodo IP, dị ka ụlọ ọrụ ahụ si kwuo, bụ nke ahụ ọ ga-eme ka ọnụahịa nke ọnụahịa ahụ dịkwuo elu ihe dịka $ 30. OnePlus ezigala vidiyo ọhụrụ, vidiyo nke a na-adaba OnePlus 7 Pro na bọket mmiri, na-ekwupụta na njedebe ya n'agbanyeghị na ọ naghị enye asambodo IP na-eguzogide ịdaba na bọket mmiri ...
Iji mechaa na-achị ndị ọrụ ọchị, na ala vidiyo ahụ, ụlọ ọrụ ahụ na-echetara anyị nke ahụ akwụkwọ ikike gị anaghị ekpuchi mmebi mmiri. Nanị ọdịiche dị n'etiti ngwaọrụ nwere asambodo IP na nke na-abụghị, bụ na anwalela ọnụ ya n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ. Ofdị ule a na-ekwe nkwa na anyị ga-enwe ike iji ọnụ na mmiri ozuzo, dịka ọmụmaatụ, n'atụghị ụjọ imebi ya.
Dịka vidio a si dị, ọ dị ka OnePlus aghọtachaghị ihe ọ na-ekwu. Ha na-anwa "ime ihe ziri ezi na-adabere na ihe dị mkpa n'ezie, ọ bụghị ụlọ ọrụ," ka ha na-azọrọ. O doro anya na asambodo IP dị n'ọtụtụ ọdụ n'ihi na ụlọ ọrụ chọrọ, ọbụghị n’ihi na ọ bụ mkpa ma ọ bụ ọchịchọ nke ndị ọrụ.
Esemokwu a ekwesịghị iju anyị anya, ebe ọ bụ na ziri ezi n'ihi na-agbakwunye wireless Nchaji bụ na ọ bụ a ngwa ngwa Nchaji usoro. Ka anyị hụ OnePlus, n'abalị, ọ dịghị onye chọrọ ka ọnụahịa ha kwụọ ụgwọ na 30 nkeji. Anyị nwere ọtụtụ oge abalị niile maka ya ịgba ụgwọ, n'agbanyeghị nwayọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Onye OnePlus 7 agaghị enwe asambodo IP mana OnePlus na-etu ọnụ na vidiyo